Ungakuthethelela njani ukuyilwa kwe-imeyile ephendulayo kwaye ungalufumana phi uncedo! | Martech Zone
Kuyothusa kodwa abantu abaninzi Sebenzisa i-smartphone yabo ukufunda i-imeyile kunokuba wenze umnxeba (faka isotto malunga nokunxibelelana apha). Ukuthengwa kweemodeli zeefowuni ezindala kwehle nge-17% ngonyaka nangaphezulu kwe-180% yabantu abasebenzayo basebenzisa i-smartphone yabo ukujonga kwangaphambili, ukucoca kunye nokufunda i-imeyile kunakwiminyaka embalwa edlulileyo.
Ingxaki, nangona kunjalo, kukuba usetyenziso lwe-imeyile aluqhubanga phambili ngokukhawuleza njengezikhangeli zewebhu. Sisabambekile kubathengi bewebhu yedesktop njenge-Outlook exhomekeke kwi-HTML endala ukunika i-imeyile ngokufanelekileyo. Abathengi abatsha be-imeyile baya kunika iinguqulelo zamva nje ze-HTML kunye ne-CSS ngokufanelekileyo, ivumela amava amangalisayo e-imeyile. Akukho lula ukuthumela i-imeyile kwaye inikezele ngokufanelekileyo kukhetho olukhulu lwee-smartphones, iitafile, iwebhu kunye nabaxhasi besoftware.
Kubalulekile ukusebenzisa injini yovavanyo efana Litmus (sidibene neyethu iqonga lokuhambisa kunye ne-250ok, iqabane). I-imeyile ephendulayo yindibaniselwano ye-HTML, CSS kunye ne-HTML entsha. Ukufomatha kunye noku-odola kwekhowudi yakho ye-imeyile kubalulekile ukuze wandise ukufundeka kwiindawo zokujonga.
Khuphela iiTemplate ze-imeyile zasimahla
Ukuba i-ESP yakho ayiboneleli ngetemplate ephendulayo, kukho izibonelelo ezimbalwa kwi-Intanethi ukufumana uncedo nge-imeyile ephendulayo:
Zurb -Upapashe uthotho lweetemplate ze-imeyile eziphendulayo.
Imeyile kwi-Acid -Ubonelela ngothotho lweetemplate zasimahla ze-imeyile ukuze unyuke kwaye usebenze ngokukhawuleza okukhulu.
Litmus Unokhetho olwakhiwe ngu IStamplia onokuzikhuphelela kwiiPSD ezinxulumene noko.
MailChimp ipapashe ezinye iitemplate eziphendulayo kwiGithub. Kwaye Phendula wongeze ezabo izinto.
IziBonelelo eziPhendulayo zeimeyile - Ingqokelela yezixhobo kunye nezixhobo zoyilo lwe-imeyile oluphendulayo.
Umxholo webali Unokhetho olukhulu lokunikezelwa okuhlawulelweyo kunye neefayile zeFotohop kunye nemiyalelo.
Iinkonzo zoyilo lwe-imeyile kunye nokuPhendula ngokuKhangela
Ngaphezulu -Ukuba ufuna uyilo olutsha okanye uyilo olufuna ikhowudi, abantu baseUpler benze umsebenzi olungileyo kubathengi bethu abambalwa!
Highbridge -Ukuba unengxaki eyodwa ofuna uncedo kuyo, ungathandabuzi ukufikelela ngaphandle!
Highbridge -Ukuba lilifu lokuThengisa okanye umxhasi wePardot kwaye ujonge ukumilisela uyilo olutsha lwe-imeyile, iitemplate, kunye neetemplate ezabelana nge-imeyile, sazise
Njengabathengisi be-imeyile, uyilo oluphendulayo lube sisihloko esishushu kwiminyaka eliqela njengoko oku kukhula kungenakulinganiswa kuqokelele umphunga. Ngoku sifikelele kwinqanaba apho uyilo lwe-imeyile oluphendulayo, YILWAYE uyilo lwe-imeyile! Kwi-infiller's infographic yamva nje, siqulunqe uninzi lwamanani abambisa amehlo agxininisa ukubaluleka kokutya kubasebenzisi beselfowuni ngonxibelelwano lwakho lwe-imeyile.
USteve Painter, uMhlohli
Umyaleli Ngumboneleli weNkonzo ye-imeyile eyakhelwe ngokukodwa iiarhente ezibonelela ngesisombululo esipheleleyo se-imeyile ukuyila, ukuthumela kunye nokunika ingxelo nge-imeyile ethunyelwe abathengi babo (zikwabandakanya izixhobo ezithile zokuhambisa kunye nokujonga igama).
Abantu baseLitmus badibanise le infographic emnandi kunye nenqaku elihamba nayo, Isikhokelo soKwenza kuYilo oluPhendulayo lwe-imeyile.
tags: 250okamanzanaIsisombululo se-imeyileUmakhi wemeyileUyilo lwe-imeyileiimonki ze-imeyileimeyile kwi-asidiIndawo yokujonga imeyileGitHubUmxhasii-litmusmailchimpinyaniphendulaimeyile ephendulayoumakhi we-imeyile ophendulayoUyilo lwe-imeyile oluphendulayoiitemplate ze-imeyile eziphendulayoizurb
I-Twitter kunye neVidiyo, Njengebhotolo yamandongomane kunye neJelly